देशमा शिक्षा किन छैन? देशमा रोजगार किन छैन? देश मा स्वास्थय किन छैन ? देश मा खाना किन छैन ? देश मा बिकास किन छैन ? – Complete Nepali News Portal
देशमा शिक्षा किन छैन? देशमा रोजगार किन छैन? देश मा स्वास्थय किन छैन ? देश मा खाना किन छैन ? देश मा बिकास किन छैन ?
हेमराज जोशी / दक्षिण भारत बेङग्लोर
बिगत लामो समय देखि यी प्रश्न हरु तपाइँ हामी सबै को मनमा छन तर यसको बास्तबिकता मा हामी कहिले पुग्न चाहेनौ र सकेनौ पनि,अब हामी जाग्नु पर्छ ,बुझ्नु पर्छ, हामी जनता ले नेताले जे भन्यो त्यसै मा ताली बजायौ,मात्र नेताको इसारा मा जिन्दावाद र मुर्दावाद का नारा लगायौ आपस मा कति लड्यौ !तर अब हरेक नेपाली ले बुझ्नु पर्छ ,नेपाली राजनीति र नेपाली नेताहरु को घृणित मानसिकता !
१)किन नेपालमा जनता अशिक्षित छ्न? किन कि नेपाल का नेताहरुले जनता लाई शिक्षा दिन चाहदैन यदि जनता लाई शिक्षा दियो भने जनता ले यिनिहरु माथी प्रश्न उठाउन सक्ने हुनेछ्न , र भोलि यिनिहरु ले के मा राजनीति गर्ने !
२)किन देश मा रोजगार छैन ? किन कि नेताहरु ले जनता लाई रोजगार दिन चाहादैनन यदि जनता ले रोजगार पाए भने नेताहरु को पछाडि जिन्दावाद र मुर्दावाद को नारा कसले लगाउछ, आफ्नो अमुल्य भोट दुई सय तिय सय र मासु भात मा कसले बेच्छ ! यो कुरा नेपालका हरेक राजनीति पार्टी का नेताहरुले बुझेका छ्न र भोलि चुनाव मा हामी रोजगार दिन्छौ भन्ने एजेन्डा नै सकिन्छ अनि यिनिहरु ले राजनीति केमा गर्ने!
३)देशमा स्वास्थय किन छैन ? माथी को जस्तै सरल तरिका ले बुझ्नुस जनता लाई सुफत मूल्य मा स्वास्थय सुबिधा मिले पछि भोलि दुर्गम मा गएर चुनाव का बेला यो ठाउँ मा अस्पताल बनाउछौ भनेर गफ दिने बाटो हराउछ अनि भोलि यिनिहरु ले केमा राजनीति गर्ने !
४)देशमा बिकास किन भएन ? कसरी हुन्छ बिकास जुन देशमा सत्ता र कुर्सी को राजनीति हुन्छ अनि बिकास गर्यो भने भोलि के भनेर राजनीति गर्छ्न यिनिहरुले उदाहरण का लागि मेलम्ची खाने पानी आयोजना म बच्चा हुदा देखि सुरु भएको हो अहिले म युबा भै सके मेलम्ची बनेको छैन ,मेलम्ची को खाने पानी हामी जनता माझ पुर्याछौ भन्ने कति राजनीति पार्टी अनि कति नेता मन्त्री फेरिए तर मेलम्ची बन्दैन किन? किन कि मेलम्ची बन्यो भने भोलि राजनीति के मा गर्ने ? एउटा कुरा मान्नुस न मान्नुस सामाजिक संजाल मा भाइरल भएको भिडियो प्रचण्ड ले नाट्कै हो र केपि ओलि ले नौट्न्की नै हो भने जस्तै यी पुराना राजनीतिक पार्टी र नेताले देश बनाउछौ भन्नू नाट्कै र नौट्न्की नै हो |